Cudurka Covid-19 ayaa la sheegay inuu dib ugu soo laba kacleeyey Koonfurta Somalia gaar… – Hagaag.com
Cudurka Covid-19 ayaa la sheegay inuu dib ugu soo laba kacleeyey Koonfurta Somalia gaar…
Waxaa isa soo taraya xaaladaha xanuunka COVID-19 ee maalin kasta laga diiwaangeliyo Gobolada Koonfurta Somalia, gaar ahaan Magaalada Muqdisho.
Tobanaan qof ayaa la soo warinayaa in maalin kasta laga helo xanuunka, iyadoo shalay oo ugu dambeysay xanuunkan laga baaray 592 qof, lagana helay 51 qof, kuwaa oo 50 ka mida ay degan yihiin Magaalada Muqdisho.
Dr. Cabdirisaaq Yuusuf Axmed, Agaasimaha Isbitaalka Martini ahna madaxa la dagaalanka xanuunka COVID-19 ayaa qiray in xanuunkaasi uu dib u soo laba kacleeyay.
“Waa run xanuunkii dib buu u soo laba kacleeyay, waxaana jira cudur dilaac cusub, waxayna u badan tahay sababta isu socodka dalka oo aad u badan, safarkiiyoo aad u badan, dalkii oo xuduudihiisii furan yihiin. Coronavirus nooc cusub inuu yimid adduunka qaybo ka mida waa laga sheegay iyo Afrikaba. Marka taas ayay noqon kartaa sababaha keeni kara in la arko dad hor leh oo uusan horey xanuunka ugu dhicin in markaan uu ku dhaco.” Ayuu yiri Agaasimaha.
Agaasimaha ayaa yiri “Isbuucaan aan hadda ku jirno iyo isbuucii la soo dhaafay tiradii ugu badneyd ee aan helnay ayay noqotay, muddo lix bilood ah. Bishii August ee sanadkii hore ayaa noogu dambeysay xaalado sidaanoo kala ah.”
Mar wax laga weydiiyay in xanuunku yahay nooca cusub ee dunida lagu arkay iyo inuu kii hore yahay ayaa tibaaxay inaanay taasi wax cadayn ah u heyn, balse qalabka ay haystaan ay ku ogaadaan oo keliya in dadku qabaan COVID-19.
“Ma kala garan karno illaa iyo hadda, anaga waxaa noo soo baxdo iyo qalabka aan haysano inay dadka COVID-19 qabaan oo keliya. Baaris gooniya ayuu rabaa oo anagana aan weli na soo gaarin.” Ayuu yiri Dr. Cabdirisaaq Yuusuf Axmed.
Dhakhtarka ayaa bulshada qudheeda ku eedeeyay inay qayb ka tahay faafitaanka xanuunka, haddii aanay diyaar u aheyn inay u hoggaansamaan awaamiirta waaxda caafimaadka, ee ay tahay in looga hortaggo faafitaanka xanuunka.
Soo laba kacleynta xanuunka ayaa imaanaya, iyadoo toddobaadkii hore ee Hay’adda Caafimaadka Adduunka (WHO) sheegtay in bishan February ay Somalia heli doonto tallaalka COVID-19.